Lucky Draw Casino| Ibhonasi engu-R450 yamahhala engenayo idiphozi
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se lucky draw casino
Isibuyekezo Se Lucky Draw Casino
Isofthiwe:Betsoft, Pragmatic Play, VIVO Gaming
Usizo: Live chat, Email
Ibhonasi Lokukwamukela:R450 Ama-Ye bhonasi Elingadinigi Diphozothi
200% Ibhonasi na 30 Yemijikelezo Yamahhala
Kunenqwaba yamakhasino aselwandle anamalayisense aphezulu futhi adumile asebenzela iRainbow Nation. Futhi ngo-2020, igama elisha lafakwa kulolo hlu – i-Lucky Draw Casino. Ngabe le khasino izoba yinhlanhla yakho kulo nyaka? Funda ukubuyekeza kwethu okujulile nokungachemi ukuthola okuningi.
Okokuqala, ake sibhekisise imininingwane ejwayelekile yeLucky Draw Casino. Ikhasino entsha sha iphethwe futhi iqhutshwa iqembu elinolwazi nelidumile – 5th Street Entertainment. Isekelwe endaweni yaseDutch Caribbean yaseCuracao, banamakhasino amaningi athandwayo ase-inthanethi asevele esemakethe. Abadlali bakujabulele ngokuphepha ukugembula ku-inthanethi nge-5th Street iminyaka engaphezu kwengu-15 manje.
Njengoba zizinze eCuracao, o-opharetha wenza ibhizinisi esebenzisa ilayisense yeCuracao e-Gaming. Isebenza ezindaweni ezisemhlabeni wonke. Amakhasino amaningi adumile aku-inthanethi asebenzisa ilayisense efanayo. Yize ingadumile njengelayisense ye-EU, iCuracao isaluphawu oluhle lwekhasino elisemthethweni eliku-inthanethi.
Ikhodi Lamabhonasi Wokwamukela e-Lucky Draw Casino
Ibhonasi eyamukelekile eLucky Draw Casino yakhelwe ukwengeza uhlamvu lwemali olubucayi kubhange lakho lekhasino. Inakho kokubili ingxenye yediphozithi yomdlalo kanye namathani wemi-jikelezo wamahhala. Ibhonasi isatshalaliswa kumadiphozithi akho amathathu okuqala ekhasino.
Amaphesenti ebhonasi aqhubeka nokukhuphuka nediphozi ngayinye, kanjena:
Ibhonasi yediphozita yokuqala
200% yediphozi elinganayo engabiza u-R20,000 + 30 ye-mijikelezo yamahhala kudiphozi yokuqala
Ibhonasi yediphozita yesibili
250% yediphozithi elinganayo engabiza u-R25,000 + 50 ye-mijikelezo yamahhala kudiphozi yesibili
Ibhonasi ngokudiphozita okwesithathu
300% yediphozithi elinganayo engabiza u-R30,000 + 30 ye-mijikelezo yamahhala kudiphozithi yesithathu
Sekukonke, ungathola isamba esingu-R75,000 uma idiphozi yakho isamba esivunyelwe semali ngokwemigomo yebhonasi. Ngaphandle kwalokho, uthola ne-110 spins yamahhala kwezinye zezindawo eziphezulu ekhasino. Uhlu lwemidlalo etholakalayo luyaqhubeka lushintsha futhi ungaluthola lolu lwazi uma usungene ngemvume.
Lawa mabhonasi awadingi ikhodi. Esikhundleni salokho, kufanele uwakhethe ohlwini olutholakalayo lweminikelo efanelekayo lapho ufaka imali. Amabhonasi okwamukelwa nawo aboshwe yile mithetho eyengeziwe:
Idiphozi encane edingekayo ukufuna lokhu kunikezwa ingu-R100
Ukunikezwa kunesidingo sokubheja esingu-35x kubhonasi + idiphozi
Amabhonasi aphelelwa yisikhathi ngemuva kwezinsuku eziyi-7
Ungafuna lokhu kunikezwa kanye kuphela ngomdlali ngamunye, nge-akhawunti ngayinye, nekheli / indawo / i-ISP
Ayikwazi ukuhlanganiswa nanoma yikuphi okunye okunikezwayo
Izikhala kuphela ezinikela ngo-100% kuzidingo zokubheja
Ubukhulu uvunyelwe ukubheja ngesikhathi sokubheja ngu-R50
Izinga 1: 200% yediphozi elinganayo engabiza u-R20,000 + 30 ye-mijikelezo yamahhala
Izinga 2: 250% yediphozithi elinganayo engabiza u-R25,000 + 50 ye-mijikelezo yamahhala
Izinga 3: 300% yediphozithi elinganayo engabiza u-R30,000 + 30 ye-mijikelezo yamahhala
Ikhodi Lebhonasi Elingadinigi Diphozothi eLucky Draw Casino
Ukufaka isicelo se bhonasi yediphozithi enegekho eNingizimu Afrika ku-Lucky Draw Casino, okudingeka ukwenze nje ukuvakashela ikhasino usebenzisa izixhumanisi zethu Ibhonasi ibiza u-R450 futhi inomkhawulo omkhulu wokukhishwa kwemali ka-R1000. Imfuneko yokubheja nayo iphansi kakhulu, ngama-25x nje kuphela inani lebhonasi. Ayikho ikhodi edingekayo yokufuna lokhu kunikezwa – bhalisa i-akhawunti yakho entsha bese ungena ngemvume ukuze uqoqe imali yakho yamahhala!
Okunye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Lucky Draw Casino
Noma iLucky Draw iyikhasino entsha sha, zivela esitebeleni esinolwazi kakhulu. Wonke amaCasino we-5th Street ajwayele ukuba namathani emiqhudelwano, ukunikezwa kwediphozithi kwansuku zonke, ukubuyisa imali, nokunye okunikezwayo okuningi ukugcina abadlali abajwayelekile behlanganyela ngenjabulo.
I-Lucky Draw Casino iyaqhubeka naleli siko lakudala ngaphandle kokuphuka izithukuthuku – ikhasi lokuphromotha elincane lekhasino ligcwele iminikelo nemincintiswano. Ukuze ukujabulele, kufanele ube ngumdlali ojwayelekile – umuntu obhalisile, wafuna futhi wasebenzisa isipho esamukelekile, futhi kamuva wenza imali engaphezulu yemali.
Lokhu okunye kokunikezwayo ongakuthola ngalezo zimali njengomdlali ojwayelekile eLucky Draw Casino:
Izipesheli Zansuku zonke
Ngabe uhlela ukudlala phakathi kweviki, noma ngezimpelasonto nje? Akukhathalekile ekhasino likaLucky Draw, ngoba banokunikezwa okukhethekile kokufakwa kuzo zonke izinsuku eziyisikhombisa zeviki! Futhi akuyona into eyodwa noma ezimbili kuphela. Usuku ngalunye, ungakhetha kumabhonasi wediphozi ahlukene angama-4-7, ngokuya ngosayizi wediphozi yakho. Banokuthile kubadlali bazo zonke izabelomali lapha, kusuka ku-25% kuya ku-300% amabhonasi. Futhi bonke banamagama amnandi afana neFull House Friday noMagnificent Monday.
Jabulela injabulo yokuncintisana kwabadlali abaningi, ngokuqhudelana nabanye abadlali eLucky Draw Casino! Dlala izikhala zakho ozithandayo futhi uthole amaphuzu ngokubheja ngakunye. Umdlali onenani eliphakeme lamaphuzu ekugcineni komncintiswano uzuza imiklomelo esukela ezinkulungwaneni zamaRandi kuya kuma-spins amahhala, amawashi wangempela eRolex, ubucwebe obuyinqaba nokunye. Ikhasino inemiqhudelwano / imijaho eminingi emifushane neyinde, kufaka phakathi imijaho yangoMgqibelo, Grand VIP, Sunday Storm, kanye neNew Players Weekly Tournament. Noma ngubani angajoyina mahhala futhi adlale!
Ukwethembeka Okubuyiselwa kwemali
Bonke abadlali ababhalisiwe eLucky Draw Casino bangathola ukubuyiselwa imali nge-15% masonto onke. Lokhu kungumnikelo ongajwayelekile futhi oyingqayizivele ongatholakali kumakhasino amaningi aku-inthanethi. Ikhasino izokhokha u-15% wakho wemali oyifakile evikini eledlule ngoMsombuluko uma ungazange wenze isicelo sokuhoxa kuleso sikhathi. Konke okudingayo idiphozi encane ka-R100 – uzobuya no-R15 mahhala ngoMsombuluko.
Ibhonasi enhle kakhulu ye-Crypto
Wonke amakhasino aku-inthanethi ngokuvamile ahlinzeka ngebhonasi eyodwa yokwamukela KuLucky Draw, ungafaka izicelo ezimbili, uma uthola isikhwama se-cryptocurrency. I-Crypto Bonus ivulekele bonke abadlali, abadala nabasha. Ungafaka isicelo salokhu okunikezwayo ngemuva kwebhonasi yakho yokwamukela uma ungumdlali omusha. Ikunika ibhonasi engu-400% kumadiphozithi akho amathathu okuqala owenziwe usebenzisa i-Bitcoin noma i-Litecoin.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi eLucky Draw Casino
Ukuthola ukupela okusheshayo kwezikhala zamahhala, ungavakashela iwebhusayithi yeLucky Draw bese ukhetha inketho ethi “Zama Manje” etholakala kuzindawo eziningi zamavidiyo. Mane uhambise isikhombisi sakho segundane ngaphezulu kwesithonjana segeyimu ukuveza le nketho. Kepha uma ufuna ukubanga ukuthi ibhonasi yediphozithi epholile, noma udlale ngemali yangempela kufanele wakhe i-akhawunti yomdlali.
Inqubo yokubhalisa ilula ngokumangazayo futhi iqondile. Inezinyathelo ezimbalwa kuphela:
Sebenzisa i-PC yakho noma isiphequluli seselula ukuvakashela iwebhusayithi yeLucky Draw Casino
Chofoza / thepha inkinobho ephuzi Joyina Manje ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi lokwamukela
Ikhasi elithi “dala i-akhawunti yakho” lizovela, nefomu okufanele uligcwalise ngemininingwane elandelayo:
Igama lakho eligcwele
Imali ekhethwayo – khetha ohlwini
Ungaphinda unikeze iphasiwedi evikelekile negama lomsebenzisi elihlukile le-akhawunti yakho yekhasino
Thatha isikhathi ufunde imigomo nemibandela yekhasino – kukhona isixhumanisi ezansi kwefomu
Uma usulungile futhi ulungele ngokweqiniso, chofoza / thepha inkinobho ethi “Ngisayinele”
Ikhasino izokwakha i-akhawunti yakho futhi ikungenise ngemizuzwana embalwa
Uzoyiswa esigabeni samadiphozithi – engeza imali ethile usebenzisa indlela oyikhokhelayo yokukhokha ukuze ufune lelo phakethe lokwamukela
Ngenye indlela, iya endaweni yokwamukela izivakashi yekhasino ngokuchofoza ku-logo ye-Lucky Draw – ama-spins wakho wamahhala awakulungele ukudlalwa!
Ukukhetha kuhle futhi kungokwakho ngempela e-Lucky Draw Casino
Khumbula ukuthi ikhasino izokucela ukuthi unikeze eminye imininingwane yokuxhumana njengekheli lakho eliphelele lezizathu zomthetho lapho ufaka imali yakho yokuqala. Futhi kuzodingeka futhi ukuthi uthumele amadokhumenti e-KYC wokuqinisekiswa kwe-akhawunti ngaphambi kokuhoxa kwakho kokuqala, kepha ngaphezulu kwalokho ngokuhamba kwesikhathi.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ungayidlala ku-Lucky Draw
Yize igama lekhasino lixhunywe emidlalweni yamakhadi efana ne-poker, uLucky Draw ukhuluma kakhulu ngezikhala. Babala iningi lemidlalo engu-300 + etholakala lapha. Indawo yokwamukela izivakashi iphethwe ngabathengisi ababili – iBetsoft nePragmatic Play. I-Octopus Gaming ngomunye umhlinzeki ozayo ozobonisa izinto zayo lapha ngenkathi iVivo Gaming iletha imidlalo ethile yomthengisi bukhoma etafuleni.
Uhlu lwabahlinzeki abane aluhlaba umxhwele kakhulu ngamazinga ekhasino aku-inthanethi ngokuqinisekile. Amanye amakhasino amaningi anamagama angama-40 + nama-1000 wemidlalo. Kepha konke lokho kweqa ngokweqile empeleni. Uma nje unamagama ambalwa aziwayo, aphezulu njengeBetsoft, uqinisekisiwe amasonto nezinyanga zokuzijabulisa okungapheli kokugembula.
Indawo yokwamukela izivakashi ihlukaniswe kahle ezindaweni ezahlukahlukene ngokuya ngohlobo lomdlalo. Kukhona ibha yokusesha yokufuna izihloko ngazinye – kwi-PC kulula ukuphuthelwa njengoba itholakala phezulu ekhasini lewebhu. Konke okunye kubukeka kuhlelwe kahle, kunokusebenziseka okusebenziseka kalula.
Ngaphakathi kwama-lobbies womdlalo ngamunye, uthola izinketho ezahlukahlukene zokuhlela ezifana ne-alfabhethi, izihloko ezithandwayo, imidlalo emisha, namageyimu asuselwa kubathengisi. Ake sibhekisise wonke ama-lobbies womdlalo eLucky Draw Casino:
Sibala izindawo ezingaphezu kwama mavidiyo angu-240 kule ndawo yokwamukela izivakashi yaseLucky Draw Casino. Futhi le ndawo inama-reels angu-5 nama-reels angu-6 kuphela, njengoba inendawo ehlukile yama-3-reel classics. IBetsoft nePragmatic Play yimikhiqizo ozoyidlala lapha. Futhi banokunye okukhethwa kukho okuphezulu, njengeWolf Gold, Dragon Kingdom, Great Rhino, nePanda’s Fortune.
Uma ufuna imidlalo engcono kakhulu eyethulwe ngo-2019 nango-2020, inketho “yemidlalo emisha” enezikhala ezinjenge-Emerald King ne-Primal Hunt nakanjani izothokozisa. Ngenhlanhla, lesi sigaba sinezimpande ezinkulu zemali, kepha sizoqokomisa labo abasesigabeni esinikezelwe kamuva.
Imidlalo yasekhasino ebukhoma iletha igumbi lomdlalo wekhasino elisemhlabeni ngaphakathi ekhaya lakho, noma kuphi nge-inthanethi esebenzayo. Uzodlala ngokumelene nomuntu ophethe, amakhadi asebenzelana ngaphakathi kwesitudiyo kude. Imidlalo isakazwa bukhoma kusetshenziswa ukusakazwa kwevidiyo.
Ubeka ukubheja ngokuya ngesenzo osibona senzeka kuvidiyo. Umthengisi angabona ukuhamba kwakho ezikrinini zabo, bese enza ngokufanele. Ungaxoxa ngisho nabathengisi phakathi kwamarounds, usebenzisa isici sokuxoxa ngombhalo. Umhlinzeki wesoftware ophethe imidlalo ebukhoma eLucky Draw Casino yiVivo Gaming.
Kunamagumbi amathathu emidlalo amakhulu kulesi sigaba. Imidlalo etholakalayo yiRoulette, iAmerican Roulette, neBlackjack VIP. Ungajoyina noma kunini njengoba imidlalo itholakala i-24×7
Ama Slots Wakudala
Ngemidlalo engaphezu kwengu-40 enikwe amandla yi-Octopus Gaming, iLucky Draw Casino ibhekela abadlali abafuna uhlobo oluhlukile lwesenzo se-slot. Le ndawo yokwamukela izivakashi imayelana nesifiso kanye nokudlala okudala kwe-slot. Imidlalo yama-reel amathathu lapha inezindikimba ezijwayelekile ezinjenge-888, jewels, nefruits.
Kukhona nokuthuthuka okuningana kwesimanje, ngezindikimba ezinjenge-Egypt, i-Ireland, iDragons, neMonkeys. Jabulela izikhala ezilula, ezinhle, ngemidlalo efana ne-888 Gold, Treasure Horse, Aztec Gems, Lucky Seven, neTriple Dragon.
Ingabe i-Lucky Draw Casino iyatholakala nakuselula?
iyahambisana namafoni wesoftware amadala njengeWindows Mobile neBlackberry. Umthetho olula wesithupha yilokhu – uma ifoni yakho inesiphequluli esibuyekeziwe njenge-Chrome, Firefox, noma iSafari, ingadlala i-Lucky Draw Casino.
Ama-Hardware specs awanandaba – lobu ubuhle bemidlalo yekhasino yanamuhla eku-inthanethi. Uhlelo lusebenzisa i-HTML5, engasindi kakhulu futhi eyenzelwe ukusebenza kuma-hardware amaningi kusukela ngo-2015. Ngakho-ke, nezingcingo ezindala zingadlala kalula ama-video slots akamuva nemidlalo ebukhoma ngo-2020.
Vele uqinisekise ukuthi uku-inthanethi ngaso sonke isikhathi – amakhasino aku-inthanethi awakuvumeli ukuthi udlale imidlalo yemali yangempela ungaxhunywanga. Inethiwekhi ye-Wi-Fi ilungile, kepha i-4G nayo ingenza umsebenzi wenziwe uma unenethiwekhi efanelekile. Ukhululekile ukudlala umdlalo kakhulu noma kuphi nge-Wi-Fi noma i-4G Signal – lowo muzwa wenkululeko uyamangalisa.
Futhi ayikho i-casino ehlukile yeselula – yinguqulo efanayo ye-PC eguquliwe futhi yathuthukiswa ukuze isebenze kangcono kumafoni wesikrini sokuthinta. Amasayithi azoba nezithonjana ezinkulu nezinkinobho, kanye nombhalo osayizi nosayizi wokuzulazula okungcono nokulayishwa okusheshayo.
Uthola amabhonasi afanayo, izinketho zokukhokha, imithetho yebhonasi, izici zokuphepha eziku-inthanethi, ukwesekwa, nokuningi ku-Lucky Draw mobile casino. Ngisho nokukhethwa komdlalo kucishe kufane. Eminye imidlalo yakudala isebenzisa ubuchwepheshe beFlash obuphelelwe yisikhathi ayisasekelwa kuselula. Kepha imidlalo emisha yonke isebenzisa i-HTML5 – ungadlala lezi zindawo ezimangalisayo nokuningi ku-Lucky Draw mobile casino:
Ngingayilanda i-Lucky Draw Casino kuselula yami?
Cha, iLucky Draw casino itholakala kuphela ngefomethi esheshayo ye-inthanethi – ilayisha esipheqululini sakho esijwayelekile seselula. Ayikho idawunilodi engeziwe edingekayo. Alukho uhlelo lokusebenza olunikezelwe lekhasino ku-Android Play Isitolo noma ku-iPhone App Store. Futhi awudingi futhi – iwebhusayithi ibukeka futhi isebenza njengohlelo lokusebenza olubushelelezi kuselula!
Izindlela Zokukhipha Imali Ezamukelwe E-Lucky Draw Casino
EcoPayz Yebo Izinsuku ezi-3
Bitcoin/Litecoin Yebo Izinsuku ezi-3
Izindlela ZokuDiphozitha Ezamukelwe E-Lucky Draw Casino
Imininingwane YeCasino Jikelele
Isungulwe: 2020 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Kusetshenziswe ngu: 5th Street Entertainment I-imeyili: [email protected]
Ilayisensi: UHulumeni waseCuracao (Antillephone) Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Inguqulo Yokudawuniloda: Cha 24/7 356 ukwesekwa: Yebo
Inguqulo Engadawunilodiwe: Yebo Iwebhusayithi: https://www.luckydraw.com/en-ZA/
Izinzuzo nezingozi ze-Lucky Draw Casino
Uma ungumuntu oziqhenyayo waseNingizimu Afrika futhi kwenzeka ukuthi uwuthande umdlalo wekhasino, azikho izinketho eziningi ezingcono kuneLucky Draw Casino. Ikakhulu, siluthande uhla lwezinketho zokuhoxa nokufaka imali olutholakala kubadlali, futhi kuhle ukubona ukuxhaswa kweBitcoin kuhlanganiswe kusuka phansi. Nakhu ukuqoqwa kwazo zonke izinzuzo nezingozi;
Amakhasino anamalayisense avela ku-opharetha owaziwayo
Inikwe amandla yi-Betsoft ne-Pragmatic Play
Ukusekelwa kwezinkokhelo zeRandi laseNingizimu Afrika
Ukuthengiselana kwe-Bitcoin namabhonasi
Imidlalo enhle kakhulu yeselula
Inamakhasino abukhoma nezimpande eziqhubekayo
Idinga abahlinzeki abaningi bemidlalo
Akukho ukwesekwa kwefoni
Yini Eyenza i-Lucky Draw Casino Ukukhetho Oludumile Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
I-Lucky Draw casino ivela kumqhubi wekhasino othembekile nonolwazi. Yize kuyikhasino entsha sha, lokhu kuyinika ukuthembeka okwengeziwe. Ukukhethwa komdlalo kuhle kakhulu, kunezindawo eziningi, amakhasino abukhoma, namajackpots. Abadlali baseNingizimu Afrika nabo bazojabulela lezi zici ezikhethekile:
Ibhonasi yediphozithi ekhethekile kanye nesipho sokwamukela
Ukuxhaswa okugcwele kwezinkokhelo zamaRandi
Ikhasi lokufika elikhethekile labadlali be-ZA
Izindlela zokukhokha ezisebenziseka kalula njenge-Easy EFT
Ama-jackpots amakhulu aqhubekayo anezigidi zamaRandi ekukhokhelweni
Njengoba inezici eziningi ezikhangayo, i-Lucky Draw casino inethuba elihle lokuba yindawo edumile yabadlali baseNingizimu Afrika ngo-2021 nangaphezulu.
Izikhalazo ngeLucky Draw Casino eNingizimu Afrika
I-Lucky Draw Casino yintsha ebhizinisini – yethulwe kuphela ngesinye isikhathi ngonyaka we-2020. Kusesekuseni kakhulu ukuthola umbono ocacile ngokusebenza kwekhasino ngesikhathi esifushane kangaka. Azikho izikhalazo ezinkulu ngokumelene nekhasino ngesikhathi sokubuyekezwa. Futhi amakhasino eqembu le-5th Street awavamisile ukuba nezikhalazo eziningi ngawo. Ngakho-ke izinto zibahambela kahle kakhulu abadlali eLucky Draw Casino.
Ingabe i-Lucky Draw Casino Isemthethweni yini eNingizimu Afrika?
Awekho amakhasino aku-inthanethi asemthethweni eNingizimu Afrika. Imithetho yendawo yokugembula ayizivumeli izinsizakalo zokugembula eziku-inthanethi ngaphakathi kwaseNingizimu Afrika. Kepha iLucky Draw casino yikhasino engaphesheya kwezilwandle ezinze eCuracao. Akusebenzi ukuthi uhulumeni alandele amakhasino aphesheya kwezilwandle. Ngakho-ke lawa makhasino amukela abadlali abavela eNingizimu Afrika. Futhi umthetho awubajezisi abadlali ngokugembula online – kuphephile nge-100% ukudlala eLucky Draw Casino uma useNingizimu Afrika.
Ngikhipha Kanjani Imali Ku Lucky Draw Casino?
Zama kuphela ukukhipha imali ekhasino eku-inthanethi uma uqinisekile ukuthi ayikho imfuneko yokubheja yebhonasi esalindwe kubhalansi ye-akhawunti yakho. Uma kunjalo, ukwenza isicelo sokuhoxa kungukwephula imithetho yekhasino – ama-winnings akho angasuswa yikhasino.
Uma uqinisekile ukuthi yonke imigomo yebhonasi iyagcwaliseka, ukukhipha imali inqubo elula eLucky Draw Casino:
Ngena ngemvume kuphrofayela yakho ekhasino
Phezulu ekhasini, ungabona ibhalansi yemali yakho yamanje
Chofoza kuso ukuze uye esigabeni sokufakwa kwemali nokukhishwa kwemali
Khetha indlela yokukhokha etholakalayo bese ufaka inani lemali olidingayo ukuze ukhiphe.
Lokhu kuzodala isicelo sokuhoxa – ithimba lekhasino lizocubungula lesi sicelo kungakapheli amahora angama-72. Okwamanje, bangakucela amadokhumende omazisi wokuqinisekisa ukuphepha. Gcina amakhophi askeniwe awo wonke amaphepha afanele elungile futhi uwathumele nge-imeyili ngokushesha lapho ikhasino ikucela. Noma ikuphi ukubambezeleka lapha kuzoholela ekutheni ukuhoxiswa kwakho kubambezeleke futhi,
Lapho ikhasino seleneliseke ngokuphelele ngokuhlolwa kwezokuphepha, bazokhipha izimali. Kungathatha noma yikuphi kusuka emahoreni angama-24 kuye ezinsukwini ezimbalwa ukufinyelela i-akhawunti yakho yasebhange, ngokuya ngendlela yokukhokha.
Iyini i-Lucky Draw Casino?
ILucky Draw Casino yikhasino entsha sha yaku-inthanethi eyethulwe ngo-2020, isebenzisa ipulatifomu esheshayo online. Ungayidlala kunoma yisiphi isiphequluli – ku-PC noma kuselula. Kuyikhasino elayisensiwe, ezinze eCuracao. Abadlali baseNingizimu Afrika bamukelekile ekhasino – lisekela izinkokhelo ngamaRandi. Ungadlala amakhulukhulu ama-slots, ama-jackpots, imidlalo yetafula, nemidlalo ye-poker eLucky Draw Casino futhi uwine imali yangempela.
Ngubani ophethe i-Lucky Draw Casino?
Ama-opharetha e-Lucky Draw Casino yiqembu elaziwa kakhulu elibizwa nge-5th Street Entertainment – basebenzisa amanye amakhasino aku-inthanethi adumile phakathi kwabadlali emhlabeni wonke. Ikhasino inikwe ilayisense futhi ibhaliswe eCuracao.
Ngabe uLucky Draw Casino unezici zokubheja kwezemidlalo?
Cha, alikho ikhasi lezemidlalo elihlanganisiwe eLucky Draw Casino. Awukwazi ukubheja kwezemidlalo lapha – ungadlala kuphela kuma-slots, Slots yakudala, i-video poker, nemidlalo yetafula kusuka kubathengisi abanjengoBetsoft.
Iphephe kangakanani i-Lucky Draw Casino?
ILucky Draw iphephe ngokweqile futhi ivikelekile ekubhejeni imali yangempela, ngenxa yalezi zici ezilandelayo:
Inikwe ilayisense yisiphathimandla sokugembula seCuracao
I-opharetha inolwazi kakhulu futhi idumile
Uthola kuphela imidlalo enelayisense futhi ehlolwe kubahlinzeki abaphezulu
Iwebhusayithi ivikelekile kusetshenziswa ukubethela okuthuthukile kwe-SSL
Izindlela zokukhokha ezethembekile kuphela ezinikezwa yikhasino